Isigaba sokuphakamisa umkhiqizo osetshenziswa kakhulu esiteji. Umsebenzi wawo omkhulu ukuhambisa isethi nabalingisi phezulu naphansi lapho kushintshwa izigcawu. Ngaphezu kwalokho ngenhloso yokuqhakambisa abalingisi abaqavile, inkundla izonyuka kancane, nabalingisi bazodansa esiteji, bakhe phezulu naphansi esiteji. Ngasikhathi sinye, inqubo yokuphakamisa isigaba nayo ingakhuphula umphumela wokusebenza.
Ukuze kuhlangatshezwane nokulawulwa kwengqondo kwesigaba sokuphakamisa umfutholuketshezi, izinzwa ezingathintwa zisetshenziswa kakhulu.
Isakhiwo esiyinhloko: Isakhiwo sesiteji sokuphakamisa umfutholuketshezi sakhiwa kakhulu (i-BOo Kuo): ipulatifomu engenhla, ithrekhi ejikelezayo, isekela isethi lokushayela nokuhlangana. Umklamo wokukhanyisa wedokodo elijikelezayo awukwazi ukunakwa, ngoba ukukhanyisa akusona nje isimo esidingekayo sokukhiqiza isipiliyoni sokubuka, kepha futhi kuyisici esiyisisekelo sefomu lobuhle. Idizayini enhle yokukhanyisa ibaluleke kakhulu ekunqumeni isitayela sangaphakathi sokuklanywa nezimpawu zesikhala sonke sombukiso nokwakha isithombe esiyinhloko sombukiso wezohwebo. Izinhlobo ezintathu zokukhanyisa okujwayelekile, ukukhanyisa okugqamile, nokukhanya okuhlobisa kwamadokodo ezimoto kufanele kube okunengqondo. Ukukhanyisa okujwayelekile kufanele kudale isitayela esithile ukugwema ukubona okulula kwempilo; ukukhanyisa okuyisihluthulelo kufanele kugqamise umkhiqizo, ukugqama kukhombisa ubukhazikhazi bezinto ezibonakalayo, ukukhanya okuqinile okuqondisayo kugqamisa umuzwa wobukhulu obuthathu nendlela yokusebenza ebusweni; ukukhanyisa okuhlobisa kufanele kukhombise isimo sombukiso nobuntu bezethameli, futhi unake ukwakheka kwangaphakathi Ubumbano.
Isigaba sokuphakamisa umfutholuketshezi sinemisebenzi eminingi njengokuphakamisa, ukujikeleza nokutshekisa. Isilawuli sisebenzisa izindlela zokuzivikela njengokuzivala ngokwakho, ukuxhumeka, inkinobho yokuhamba, umkhawulo womshini, ubufakazi bokuqhuma kwe-hydraulic, njll. (Isikhombisi sixazulula inkinga). Itafula lokuphakamisa lamukela uhlelo lokuqondisa olusebenzayo, ukuze igebe phakathi kwetafula le-telescopic netafula elingaguquki lincane ngesikhathi sokuhumusha, ukusebenza kuzinzile, futhi ijubane alinyatheli. I-synchronizer iqhutshwa ngejubane eliphansi ne-torque ephezulu, ukuze okusebenzayo kuhambisane ngokuphelele, kumahhala futhi kusendaweni ngesikhathi senqubo yokukhulisa, futhi kungabekwa ngokuzenzekelayo. Ifanele izindawo zamasiko nezikaqedisizungu ezifana namahholo, ama-cinema, amahholo asebenza imisebenzi eminingi, ama-studio, izindawo zamasiko, amahhotela, njll. Umklamo wokukhanyisa wamadokodo ajikelezayo awunakushaywa indiva, ngoba ukukhanyisa akusona nje isimo esidingekayo sokubona, kepha futhi nesici esiyisisekelo sefomu lobuhle. Idizayini enhle yokukhanyisa ibaluleke kakhulu ekunqumeni isitayela sangaphakathi sokuklanywa nezimpawu zesikhala sonke sombukiso nokwakha isithombe esiyinhloko sombukiso wezohwebo. Lezi zinhlobo ezintathu zokukhanyisa okufana nedokodo lezimoto, ukukhanya kwe-accent, nokukhanya okuhlobisa kufanele kube okunengqondo. -Ukukhanyisa okujwayelekile kufanele kudale isitayela esithile ukugwema ukukhanya kwempilo; ukukhanyisa okuyisihluthulelo kufanele kugqamise umkhiqizo, ukugqama kukhombisa ubukhazikhazi bento, ukukhanya okuqinile okuqondisayo kugqamisa umuzwa wobukhulu obuthathu kanye nendlela yokusebenza komhlaba; ukukhanyisa okuhlobisa kufanele kukhombise isimo sombukiso nobuntu bezethameli, futhi unake ukwakheka kwangaphakathi Ubunye-bemvelo. Kufanele amahholo, amabhayisikobho,
Amahholo enzelwa imisebenzi eminingi, izitudiyo, izindawo zamasiko, amahhotela nezinye izindawo zamasiko nezikaqedisizungu.
● Isakhiwo se-Scissor sihlangene, singakwazi ukuzivumelanisa nokusebenza okuqhubekayo kwemvamisa ephezulu.
● Ukuphakama kokuqina, ukuhlangana nabantu noma izinto ezibushelelezi zokuphakamisa amathani amakhulu.
● Isiteji sokuphakamisa umfutholuketshezi esine-anti-enamathiselwe, uhlelo lokuvikela ukuphepha lwe-hydraulic ukuqinisekisa ukuphepha okuphephile.
● Ipulatifomu yokuphakamisa umfutholuketshezi nokunye ukucushwa ukuhlangabezana nezidingo zama-conditioins ahlukahlukene.
I-Proscenium ibhekisa kuzithameli ngakolunye uhlangothi lwesiteji, kanti kolunye uhlangothi lwesiteji lumbozwe ngento, ukuze abalingisi nabachwepheshe basebenze.
2. Stetching isigaba
3. Isigaba esiyindilinga
Isiteji esiyindilinga ukubhekisa kuzethameli ezizungeze inkundla. Imvamisa isigaba sezindandatho sikhona maphakathi nenkundla, futhi izethameli zingajabulela ukusebenza zisondele.
Langaphambilini Trailer egibele Boom Phakamisa
Olandelayo: Ukuzishayela okuzenzakalelayo Ukuphakamisa
Umfutholuketshezi Phakamisa Isiteji
Umfutholuketshezi Stage Phakamisa